Rabshadihi Ka Dhacay Itoobiya Oo Loo Xidh-Xidhay 359 Qof | Caroog News
Rabshadihi Ka Dhacay Itoobiya Oo Loo Xidh-Xidhay 359 Qof
Image captionKafyalew Teferra
Booliska deegaanka Oromada ayaa sheegay rabshadihi toddobaadki hore ka dhacay dalka Itoobiya oo ay dada badan ku dhinteen dadki ku lug lahaa oo gaaraya 359 qof in xabsiga loo taxaabay.
Tirada rasmiga ah ee dadka rabshadaha ku dhintayna sida ay boolisku xaqiijiyeen waa 67 qof, Axadda wixi ka dambeeyeyna wax rashado ah ma dhicin ayuu yidhi.
Hase yeeshee, rabshadaha si siyaasadeysan ku billawday marki dambana qaab diimeed iisu beddelay lama dhihi karo “koox hebla waxaa saa gaaray iyo koox hebla intaasa ka dhimatay, balse rabshaduhu markay diin iisu beddeleen labada diimood ee Kirishtanka iyo Muslimkaba ay dad ka dhinteen” ayuu yiri.
Rabshadaha dadka ku dhintay
“Rabshadihi ka taagnaa magaalada Adama oo la moodo iney maanta soo yaraanayaan haddana waxaa weli isbitaalka soo gaaraya dad dhaawacyo cusub qaba” ayuu yiri Dr Fiqaadu.
“Dhalinyaro badan oo isa soo uruursatay ayaa guriga adeerkey nagu soo werartay marka hore waxay dileen aderkey Tamraat Tsegaye, kaddibna waxay dileen wiilkiisa, mar seddexaadna waxay dileen wiil seddexaad oo adeerkey dukaankiisa iibinayey sidaa ayey 3 qof nooga dileen” ayuu yiri.
“Dadka nalaga dilay magaalada Kofale oo ay ku dhasheen xataa inaan ku aasno waa naloo diiday, ugu dambeynti rafaad badan kaddib waxaan seddexdooduba ku aasnay magaalada Adaama” ayuu yiri Abinet oo BBC u warramay.
Agaasimaha Isbitaalka Dil-chorra ee magaalada Diridhaba Dr C/raxmaan Abubakar wuxuu sheegay: “Magaalada Diridhaba Arbacadi in lagu dilay 1 qof, 4 qof oo dhaawac ahaan isbitaalka magaalada diridhaba loo keenay in lagu dabiibana ay dhaawaca u geeriyoodeen taasoo tirada dadka dhintay ka dhigeyso 4 qof”.
Inkastoo rai’sul wasaare Abiy lagu ammaanay isbadallada uu dalkaasi ka hirgaaliyay ayaa hadana waxaa uu la daalaa dhacayaa xal u helidda isku dhacyo u dhaxeeya qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi.
Caasimadda Addis Ababa, ayaa taageerayaashiisa waxay balaanqaadeen in iyaga ay ammaankiisa sugayaan, waxaana la maqlayay dibadbaxayaasha oo ku dhawaaqayay ” Abiy ha dhaaco.”
Gubidda buugga rai’sul wasaaraha ayaa ka dhacday magaalada Dadar.
Buugga ayaa waxa qoraaladiisa diiradda lagu saaray fikirada siyaasadda rai’sul wasaaraha iyo sidoo kale halka uu higsanayo in uu Itoobiya garsiiyo.
Mr Jawar ayaa warbaahintiisa, Oromo Media Network (OMN), u isticmaalay dibadbaxyadii dowladda looga soo horjeeday 2016 ilaa 2018,xilligaasi oo uu dalka rai’sul wasaare ka ahaa Hailemariam Desalegn.